लुसिंडा रिले: अर्कीडको रहस्य पछाडिको प्वाँख | वर्तमान साहित्य
लुसिंडा रिले एक महत्वपूर्ण बेलायती लेखक हुन् जसले उनको सफल उपन्यासहरूको लागि साहित्यको क्षेत्रमा उभिनुभयो। को प्रकाशन पछि अर्किडको रहस्य, लेखकले संसारभरि असंख्य पाठकहरूलाई जित्यो। लगभग years० बर्षको इतिहासको दौडान रिलेका कार्यहरू दर्जनौं देशहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन् र million करोड भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि भइसकेका छन्।
२०१ greatest मा श्रृंखलाको सुरूवातसँगै उनको सबैभन्दा ठूलो सफलताहरू मध्ये एक सफल भयो अरबपति: ती सात बहिनीहरू। यस श्रृंखलाका प्रत्येक उपन्यासले यसका अनुयायीहरूबाट उत्कृष्ट स्वागत पाएको छ। यो २०२१ लेखकले प्रीमियर गर्‍यो: हराएको बहिनी, संग्रहको सातौं किस्त. यस अन्तिम प्रकाशनले हप्ताको लागि विश्वव्यापी बिक्रीको पहिलो स्थान ओगटेको छ।
1 लेखकका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
1.1 अर्किडको रहस्य (२०१०)
1.2 परीको जड़हरू (२०१ 2014)
1.3 सात बहिनीहरू: माइयाको कथा (२०१ 2016)
1.4 पुतली कोठा (२०१ 2019)
2 लसिंडा रिले जीवनी
2.2 प्रारम्भिक साहित्यिक कार्यहरू
2.3 सफल उपन्यासहरू
2.5 लुसिंडा रिले पुस्तकहरु
लेखकका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
अर्किडको रहस्य (2010)
जुलिया फोरेस्टर - एक प्रसिद्ध पियानोवादक एक दुखद घटना को माध्यम बाट जानुहोस् त्यसले उसको जीवनको सार हटाएको छ। हार्टब्रोकेन, उनी गयो उनको दिदीको छेउमा सान्त्वना खोज्छ मेजर, एलिस। केही महिना बित्यो, र तिनीहरू दुबै यात्रामा गए वार्टन पार्क हवेलीमा (जहाँ उनीहरूले आफ्नो बाल्यावस्था र किशोरावस्थाको केही अंश खर्च गरे), यो बिक्री पछि हो भनेर थाहा पाए पछि।
उसको बचपनको सम्झनाहरु सम्झना आउँदछ, जब उनी खुशीसँग हरितगृहमा उसको भित्री हजुरबुबा विधेयक संग साझा गरे - त्यो कुलीन हवेलीको माली। त्यहाँ पुग्दा उसले आफ्नो युवावस्थाको साथी किट क्रफोर्डलाई भेट्छ, त्यो परिवारको अन्तिम उत्तराधिकारी। उसले जीर्ण सम्पत्ति बेच्ने निर्णय गरेको छ जुन बर्षमा रखरखाव छैन।
आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न, जवान मानिस हवेलीमा लिलामी राख्छन्; जुलिया यस कार्यक्रममा भाग लिन्छिन्। त्यहाँ, उनले थाइल्याण्डको अनौंठो अर्किड मूल निवासी क्यानभास फेला पार्छिन्, हजुरबुबा हजुरका विदेशी फूलहरूले झैं। किट, यस बाहेक, उसलाई डायरी दिनुहोस्, जुन उसलाई लाग्छ कि ढिलो विधेयकको हुन सक्छ। उत्सुक, जुलिया आफ्नो हजुरआमा एल्सीको घरतिर लागिरहेकी छिन्, कि यस यात्राले विगतका गहिरा रहस्यहरू प्रकट गर्दछ कि भनेर जान्दैनन्।
को रहस्य ...
परी को जरा (2014)
ग्रेटाले आफ्नो पुरानो घर, मार्चमन्ट हलमा, मोनमोथशायर गाउँमा गएको तीन दशक भन्दा बढी भइसकेको छैन। उनको विश्वासी साथी, डेभिड, जसलाई उनी मायालुपूर्वक टाफी भन्छिन्, उनीले क्रिसमस सँगै बिताउन त्यहाँ फर्कने निम्त्याइन्। Greta केहि याद छैन, न त त्यो ठाउँमा, न त उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको समयको, गम्भीर दुर्घटनामा जसमा उनले आफ्नो स्मृति गुमाए.
एक पटक त्यो वातावरणले घेरेको - जुन चिसो भए पनि सहजै छ - उनी एक टूर लिन्छिन् र पत्ता लगाउनुहोस् — धेरै शाखाहरूको गुच्छा— चिहान। चिहानले स child्केत गर्दछ कि त्यहाँ एउटा बच्चा पुरिएको छ। त्यस क्षणदेखि ग्रेटाको दिमागमा सम्झनाहरू आउन थाल्छन् कि हराएको घटना पछि हराए; टाफी उसलाई उसलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ।
१ is XNUMX० को दशक (विगत), र १ XNUMX s० को दशक (वर्तमान कथा): दुई युगहरूका बीच तर्क यस्तै देखिन्छ। मेमोरी बाट मेमोरी Greta सुधारीरहेको छ धारणा उसले थियो उसको संसार, सहित को उनकी छोरी चेस्का, षड्यन्त्रमा कालो र निर्णायक पात्र, र जसको कार्यहरू एक विकृत दिमागमा उचित छन् ...
परी को जरा
सात बहिनीहरू: माइयाको कथा (2016)
Maia D'Aplièse आफ्ना साना बहिनीहरू संग तिनीहरू हुर्काएको ठाउँमा फर्कन्छ. कारण: la अफसोसजनक पा नुनको मृत्यु, जसले धेरै समय अघि नै तिनीहरूलाई अपनाए र उनीहरूको हेरचाहमा आफूलाई समर्पित गरे। उनको मृत्युको पूर्वानुमान गर्दै, रहस्यमय चरित्रले उनका प्रत्येक छोरीका लागि कागजात छोडिदियो जुन उनीहरूले आफू कहाँबाट आएको हो भनेर जान्न अनुमति दिनेछ।
Maia Theआफ्नो पत्रमा प्राप्त गरेको जानकारीको विश्लेषण पछि - ऊ रियो दि जेनेरियो जान्छ। संकेत गरिएको ठाउँमा पुगेपछि, नायकले एउटा पुरानो घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भेट्टाए। उसको जिज्ञासाले उनलाई अगुवाई गर्छ एक कथा पत्ता लगाउन जुन 20 मा फिर्ता जान्छजब ख्रीष्ट मुक्तिदाता निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
त्यस समयमा नयाँ कथा थ्रेड सुरू हुन्छ जसमा इजाबेला बोनिफेसियो समावेश छन्, एक भावुक युवती। उनी आफ्नो बुबालाई बिहे गर्नु अघि उनलाई पेरिस जान अनुमति दिन्छिन्। एक पटक प्रकाश शहरमा, महिला लॉरेन्ट ब्रौलीमा हाल्छिन्... र यो हुन जान्छ एक महत्वपूर्ण मुठभेड त्यो Maia अज्ञात धेरै जवाफ दिनुहुन्छ।
सात बहिनीहरू (...
पुतली कोठा (२०१ 2019)
एडमिरल घरमा, अ Su्ग्रेजी सफ्ल्क गाउँमा एउटा भव्य हवेली, जीवनभर पोसी मोन्टग। पहिले नै उनको सातवां जन्मदिन आउँदै, महिला तपाईको बाल्यकालको रमाइलो क्षणहरू सम्झनुहोस् जसमा उनी र उनको बुवा तिनीहरूले पुतलीहरू समातिए केवल तिनीहरूको सुन्दरताको प्रशंसा गर्न र तिनीहरूलाई जारी गर्न। अहिले वृद्ध महिलाले उदासिन क्षणहरू पनि सम्झिन् जुन उनको अस्तित्व भरमा चिह्नित गर्थिन्।
एक पोसी ऊ प्रारम्भिक विधवा हुनुपर्थ्यो, यसैले उनले आफ्ना दुई बच्चाहरूलाई एक्लै हुर्काउनुपरेको थियो: निक y साम उनको वर्तमान अवस्थाले निर्णय लिनको लागि उनलाई नेतृत्व गरेको छ परिवार बिक्री को लागी घर मा राख्नुहोस् - यो सम्पत्ति र विशेष गरी भव्य बगैंचा को लागि उसले २ love बर्ष भन्दा बढी समय समर्पण गरेको भए पनि उसको प्रेमको बाबजुद। कारण: एडमिरल घर छिटो खस्कन्छ, र मोन्टोग, लगभग सात दशक पुरानो, मर्मत गर्न सक्दैन।
माथि वर्णन गरिएको बाहेक, मातृत्व सामना गर्न को लागी हुनेछ अन्य कठिनाइहरू जुन यसको वरिपरि छन्। रक्सीको समस्याको साथ एक बच्चा, एक पुरानो प्रेम जुन एक रहस्य खुलाउन फेरि देखा पर्दछ, र विगतलाई उहाँ जान्नुहुन्न, जुन हवेलीको भित्तामा लुकेको छ।
कथा आउँछ र जान्छ 1943 र 2006 को बीचमा, त्यसमा गलत निर्णयले पूर्ण विगतको इतिहास देखाइएको छ कि वर्तमान मा एक ठूलो प्रभाव छ र त्यो मात्र साँचो प्रेम क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ.
को कोठा ...
लसिंडा रिले जीवनी
लसिंडा एडमन्ड्स शुक्रवार १ February फेब्रुअरी १ ​​16 .1968 मा लिस्बर्न, आयरल्यान्डमा जन्म भएको थियो। उहाँ ड्रमबेग गाउँमा छ वर्ष सम्म बस्नुभयो। त्यसपछि उनी आफ्नो परिवारसँग इ England्ल्याण्डमा सरे, जहाँ उसले आफ्नो पहिलो अध्ययन ब्याले कक्षा संग मिलायो। सानो छँदा, लेखकसँग ठूलो कल्पना थियो, आफ्नो खाली समय मा उनी कथा पढ्न र लेख्न मन पराउँथे जुन उनले त्यसपछि उनको आमाको लुगा प्रयोग गरी मंचन।
कलिलो उमेरदेखि नै, लुसिंडाको प्रदर्शन कलाको लागि प्रेम प्रबल भयो। १ 14 वर्षको उमेरमा उनी लन्डन गए, जहाँ उनी नाच र नाटक प्रतिष्ठानमा भर्ना भए। तीन बर्षको तयारी पछि, उनले श्रृंखलाको मुख्य भूमिका निभाए खजाना खोज्नेहरूको कथा, टेलिभिजन नेटवर्कमा बीबीसी त्यस पछि, उनले लगातार सात बर्षसम्म प्रोफेशनल स्तरमा काम गरे थिएटर, टेलिभिजन र सिनेमा।
प्रारम्भिक साहित्यिक कार्यहरू
१ 23 बर्षको साथ र थकान र ज्वरोको पछि, रिले एपस्टेन-भाइर भाइरस पत्ता लागेको थियो। यस रोगले उनलाई लामो समयसम्म ओछ्यानमा राख्यो। यस अवधिमा, आफ्नो पहिलो पुस्तक लेखे, प्रेमी र खेलाडीहरू (1992)। यद्यपि यसले ठूलो प्रभाव पार्न सकेन, कामले प्रोत्साहनको रूपमा काम गर्‍यो। त्यस क्षणदेखि, आयरिश महिलाले उनको पारिवारिक जीवनलाई साहित्यिकको साथ मिलाइदिए र आठ अन्य उपन्यासहरू पनि निर्माण गरे।
LMT (दोहोर्याउने गति चोटहरू) र hyperactivity को साथ आफ्ना समस्याहरूको कारण, कम्प्युटरको अगाडि बसेर यति धेरै समय खर्च नगर्ने गरी ड्याफोनफोन किन्ने निर्णय गरें। यसले उनीहरूको प्रदर्शनलाई ठूलो सजिलो बनायो।
अर्को १ years बर्षको लागि, लेखकले यस्तो प्रकारको उपन्यास सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे जुन व्यावसायिक थिएनतर केहि उनी आफूलाई पढ्न मन पराउँछन्। आफ्नो कथामा उनले ऐतिहासिक विवरण पनि थपे जसद्वारा प्लट्सलाई पाठकहरूमा बढी प्रवेश गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लिखित पूर्ण रूपमा एकरूप हो भनेर थाहा पाएर उही लेखकले भने: "सदाका लागि म सहजै विगतमा आकर्षित हुँदछ र सधैं पढ्छु ऐतिहासिक उपन्यासहरू. मेरो मनपर्ने अवधि १ 1920 30० / XNUMX० को दशक हो र F. स्कट फिजजेराल्ड र एभलीन वॉ जस्ता अद्भुत लेखकहरू।
यो यस्तो थियो २०१० मा उनले के यस्तो काम प्रकाशित गरीन् जसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउँदछ: अर्किडको रहस्य। यो कथा एक लामो समय को लागी शीर्ष बिक्री स्पॉट आयोजित। सूत्र यति लोकप्रिय थियो कि रिलेको अर्को चार कार्यहरू पनि भयो Bestsellers.
En डिसेम्बर 2012, एक परिवार गाथा संग शुरू गर्ने निर्णय गरे त्यो केही युवा महिला र तिनीहरूका रहस्यमय बुबाको वरिपरि घुमायो, जुन उनले शीर्षक दिए: ती सात बहिनीहरू. सुरुबाट, प्रकाशन कुल सफलताको परिणाम। तसर्थ, २०१ 2014 मा यसले यस श्रृंखलामा वर्षौं बर्ष एक पुस्तक प्रकाशित गर्न शुरू गर्यो, जसमध्ये अहिलेसम्म सातवटा किस्तहरू छन्।
आशा गरिएको थियो que en el 2022 प्रकाशित हुनेछ एटलस: पा नुनको कथा, गाथा को पूरकको रूपमा। जे होस्, मृत्यु अप्रत्याशित लेखकको पालो लिनुभयो दुखद योजनाहरुमा। यद्यपि, उनको छोरा, ह्यारी व्हिट्कर, उनले भने कि उनीहरु पालना गर्छन् आफ्नो आमाको इच्छा संग र आठौं किस्त लिनको लागि जिम्मेवार हुनेछ en को वसन्त 2023.
यस सन्दर्भमा, व्हिट्करले भने: "आमाले मलाई शृ .्खलाका रहस्यहरू बताउनुभएको छ र म उहाँप्रति समर्पित पाठकहरूसँग बाँड्नको लागि मेरो वाचा पूरा गर्दछु।"। जवान मानिस काम को एक सह लेखक हुनेछ।
लुसिंडा रिले जुन ११, २०२१ मा मृत्यु भयो, 53 XNUMX वर्ष पुरानो। उनका आफन्तहरूले एक बयानका माध्यमबाट उनको मृत्युको घोषणा गरे, एक भयानक क्यान्सर विरुद्ध चार बर्ष लड्न पछि।
चट्टानमा केटी (2011)
विन्डो पछाडिको प्रकाश (2012)
मध्यरात उठ्यो (2013)
हेलेनाको रहस्य (2016)
बिर्सिएको पत्र (2018)
पुतली कोठा (2019)
सागा ती सात बहिनीहरू
सात बहिनीहरू: माइयाको कथा (2014)
बहिनी आँधी: सहयोगीको कथा (2015)
छाया बहिनी: स्टार कहानी (2016)
बहिनी पर्ल: CeCe कहानी (2017)
बहिनी मून: टिग्गीको कथा (2018)
बहिनी रवि: इलेक्ट्राको कहानी (2019)
हराएको बहिनी: Merope's कहानी (2021)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » लुसिंडा रिले पुस्तकहरु
नीलो जिन्स। शिविरका लेखकसँग अन्तर्वार्ता